I-Raw (R) -Oxiracetam Powder (68252-28-8) Abakhiqizi - i-Phcoker
I-Raw (R) -Oxiracetam powder (igama lekhodi yokuthuthukisa i-ISF 2522) isidakamizwa se-nootropic somndeni we-racetam futhi simnene kakhulu …….
Umthamo: 1420kg / inyanga
I-Raw (R) -Oxiracetam powder (i-68252-28-8) ividiyo
I-Raw (R) -Oxiracetam powder yi-Ranti -enantiomeri ye-oxiracetam yezidakamizwa ze-nootropic. I-Oxiracetam (i-ISF 2522) yisidakamizwa se-nootropic somndeni we-racetam futhi ishukumisayo. Inani le-IC50: I-Target: Isidakamizwa se-nootropic I-Oxiracetam (i-ISF 2522) yisidakamizwa se-nootropic yomndeni we-racetam futhi ivuselela.   Izifundo eziningi zesilwane ziphakamisa ukuthi lo mzimba uphephile ngisho nalapho ukuphakama okuphezulu kudliwe isikhathi eside . [citation medical] edingekayo] Nokho, indlela yokwenza umndeni wezidakamizwa ze-racetam kusengumsebenzi wokucwaninga. I-Oxiracetam ayivunyelwe yi-Food and Drug Administration yokusetshenziswa kwezokwelapha e-United States.
I-Raw (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) Siziqu
Igama Product Okumnyama (R) -Oxiracetam powder
I gama le-brand Ayikho idatha etholakalayo
CAS Inombolo 68252-28-8
I-molecular Fi-ormula C6H10N2O3
I-molecular Weziyisishiyagalombili 158.16
IMisa ye-Monoisotopic I-158.069 g / mol
ukubila Point 494.6 ° C ku-760 mmHg
Sukufaneleka I-Soluble ku-DMSO
Sukuhlushwa Tukushisa Okomile, okumnyama naku-0 - 4 C isikhathi esifushane (izinsuku kuya emavikini) noma -20 C isikhathi eside (izinyanga kuya eminyakeni).
Aukuphikisana I-enantiomeri ye-oxiracetam (O846905) ene-nootropic encane njenge-nootropic kune-enantiomeri yayo (-) - S.
Raw (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) Incazelo
I-Raw (R) -Oxiracetam powder yi-Ranti -enantiomeri ye-oxiracetam yezidakamizwa ze-nootropic. I-Oxiracetam (i-ISF 2522) yisidakamizwa se-nootropic somndeni we-racetam futhi ishukumisayo. Inani le-IC50: I-Target: Isidakamizwa se-nootropic I-Oxiracetam (i-ISF 2522) yisidakamizwa se-nootropic yomndeni we-racetam futhi ivuselela.   Izifundo eziningi zesilwane ziphakamisa ukuthi lo mzimba uphephile ngisho nalapho ukuphakama okuphezulu kudliwe isikhathi eside . [citation medical] edingekayo] Nokho, indlela yokwenza umndeni wezidakamizwa ze-racetam kusengumsebenzi wokucwaninga. I-Oxiracetam ayivunyelwe yi-Food and Drug Administration yokusetshenziswa kwezokwelapha e-United States
(R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) Inqubo yesenzo
(R) -oxiracetam, kwakuyisithako esiphumelelayo esinciphisa ukukhubazeka kokufunda kwendawo kanye nenkumbulo ngokuthuthukisa ukulimala kwe-neuron kanye nezilonda zamhlophe, ukwandisa ukugeleza kwegazi, nokuvimbela ukusebenziswa kwe-astrocyte kuma-rats angapheliyo ama-cerebral hypoperfused.
Izinzuzo of (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8)
Ukuthuthukiswa kwezwi elizwakalayo
Ubumnene Futhi Bukhuthaza Ukuvuka
Kunconywe (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8) Isilinganiso
Umthamo we-oxiracetam ungaphansi kwe-piracetam, kodwa lokho akusho ukuthi inani elincane lizokwanela. Isilinganiso esivela phakathi kobubanzi be-1200 mg ne-2400 mg ethathwe phakathi nenkathi yosuku, mhlawumbe ngezikhathi ezilandelanayo zokusabalalisa ezilinganayo ezimbili noma ezintathu (njengamanani amathathu we-400mg noma i-800mg).
Okuqhamuka uma udla imishanguzo of (R) -Oxiracetam powder (68252-28-8)
I-oxiracetam ingabangela ubuhlungu bekhanda. Ukuze ususe ikhanda le-oxiracetam, vele uthathe isithasiselo se-choline njenge-alpha GPC noma i-citicoline.
Ngenxa yokuthi inezakhiwo ezinomsindo omncane, i-oxiracetam ingase iphazamise imijikelezo evamile yokulala uma iphuzile kakhulu emini.
Imiphumela emibi yokungalahleki nokwesaba, kuyilapho kungavamile, kuye kwabikwa ngezinye izikhathi. Lezi zindlela ngokuvamile zingagwenywa ngokuthatha i-oxiracetam ekuqaleni kosuku noma ukunciphisa umthamo.